PA: March 2013
Posted by Phoe Aye at 2:05 PM No comments:
Labels: ကြိုးကြာ သီချင်းနုတ်စ်များ
Posted by Phoe Aye at 6:14 AM No comments:
Labels: ခင်မောင်တိုး သီချင်းနုတ်စ်များ
Posted by Phoe Aye at 11:29 PM No comments:
Labels: ဘိုဖြူ သီချင်းနုတ်စ်များ
Posted by Phoe Aye at 11:26 PM No comments:
Labels: ထူးအိမ်သင် သီချင်းနုတ်စ်များ
Posted by Phoe Aye at 11:16 PM No comments:
Labels: မာရဇ္ဇ သီချင်းနုတ်စ်များ
Posted by Phoe Aye at 5:23 PM No comments:
Labels: စန္ဒီမြင့်လွင် သီချင်းနုတ်စ်များ
Digital Guitar Tuner ဆောစ်ဝဲလေးပါ။
ဂစ်တာကြိုးမညှိတတ်သေးတဲ့ ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် အဆင်ပြေမှာ
Digital Guitar Tuner ဆောစ်ဝဲဒေါင်းရန်
Posted by Phoe Aye at 7:17 AM No comments:
Posted by Phoe Aye at 4:21 AM No comments:
Labels: နီနီခင်ဇော် သီချင်းနုတ်စ်များ
Motley Crue -ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ပါ
Alfred Publishing | September 1, 2003 | English | PDF | 166 pages | 30.5 MB
From Matley Crave's Nikki Sixx, Vince Neil, Tommy Lee, and Mick Mars comes this greatest hits retrospective. The folio includes two new titles, ""Bitter Pill"" and ""Enslaved,"" and all the music is written in standard notation and tab. A must for all heavy metal maniacs! The 17 titles are: Bitter Pill * Enslaved * Girls, Girls, Girls * Kickstart My Heart * Wild Side * Glitter (remix) * Dr. Feelgood * Same Ol' Situation * Home Sweet Home * Afraid * Don't Go Away Mad (Just Go Away) * Without You * Smokin' in the Boys Room * Primal Scream * Too Fast for Love * Looks That Kill * Shout at the Devil '97
Posted by Phoe Aye at 12:35 PM No comments:
Labels: Original ဂစ်တာ စာအုပ်များ
BASS-RHCP Signature Licks with Mp3
Bass Guitar ၀ါသနာရှင်များအတွက်
Files: PDF Lenght : 56 Pages
MP3 : 50 track 62.81 MB
*Freaky Styley*The Jungle Man*The Uplift Mofo Party Plan*Fight Like A Brave*Behind The Sun*Mother's Milk*Higher Ground*Subway To Venus*Kock Me Down* Blood Sugar Sex Magik*Breaking The Girl*Give It Away*Under The Bridge*One Hot Minute*Aeroplane*My Friends
စာအုပ် နှင့် အသံဖိုင် ဒေါင်းရန်
Posted by Phoe Aye at 12:23 PM No comments:
Labels: Original ဘေစ်ဂစ်တာ စာအုပ်များ
Posted by Phoe Aye at 8:22 AM No comments:
Labels: ဂရေဟမ် သီချင်းနုတ်စ်များ
Piano Lesson ebook လေးပါ။ တော်တော်လေးကောင်းလို့ တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီလင့်မှာဒေါင်းပါ။
Posted by Phoe Aye at 1:32 AM No comments:
Labels: Original Piano စာအုပ်များ
စန္ဒီမြင့်လွင် - ပျော်ပါစေ
Posted by Phoe Aye at 12:07 AM No comments:
ဒီတစ်ခါတော့ Flute & Jazz Piano ကို လေ့ကျင့်လိုတဲ့သူတွေအတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့ Exercise လေးကို ဒေါင်းရလွယ်အောင် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုက်ကြီးပေမဲ့ Exercise တွေစုံနေအောင်ပါတော့ လေ့လာလိုသူတွေအတွက် အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted by Phoe Aye at 12:00 AM No comments:
Posted by Phoe Aye at 9:18 AM No comments:
Labels: ဟေမာနေ၀င်း သီချင်းနုတ်စ်များ
အမှတ်တရလက်ဆောင်တေးစီးရီး / Band-Belief / ဥာဏ်လင်းအောင်၊ ဆိုတေး၊ ခင်ဘုဏ်း၊ ကျော်သီဟ၊ မိုးသောက်၊ ၊သြော်ဒြေမိုး၊ ခိုင်နီ.........
၀၁။ ​နောက်ကွယ် - ဉာဏ်လင်း​အောင်
၀၂။ ငါတစ်​ယောက်တည်း​ - အယ်ထူး​နော်
၀၃။ မြို့​အေသင် - ဂျွန်ဂို
၀၄။ ငါ့​ရဲ့​အမှား​ - ခိုင်နီ
၀၅။ ​နွေဦး​စောင့်​ချိန် - လင်း​အံ
၀၆။ ဘယ်မှာလဲ - ​နော်ဇိုင်း​
၀၇။ အစကတည်း​က - မိုး​သောက်
၀၈။ ရည်း​စား​ဦး​ဘဝ - ​ကျော်သီဟ၊​ ဪ​ဒြေမိုး​
၀၉။ ​နောင်တ - Phobia
၁၀။ အဆုံး​အစွန် - ဆို​တေး​
၁၁။ အမှား​တစ်ခု - Unknown Criminals
၁၂။ လွမ်း​တတ်ခဲ့​ရင် - ​ခေတ်လူ
၁၃။ တစ်​ယောက်တည်း​ချစ်သူ - ဖြိုး​ငယ်
၁၄။ စိတ်ကူး​ကကြိုး​ - Goe Goe
၁၅။ ခြား​နား​ခြင်း​ - ​ဇော်​ဇော်
၁၆။ ​ကျေး​ဇူး​ - ခင်ဘုဏ်း​
၁၇။ ဖွင့်​ပြောမယ် - ဘိုဘိုအိုင်
၁၈။ အတိတ်အိပ်မက် - ဥက္ကာ
၁၉။ Bonus Song
Posted by Phoe Aye at 11:38 AM 1 comment:
Posted by Phoe Aye at 11:22 PM No comments:
Labels: ချမ်းချမ်း သီချင်းနုတ်စ်များ
Paul Schmeling - Berklee Music Theory Book2(PDF + Audio)
သီအိုရီလေ့လာလိုသူများအတွက် စာအုပ် နဲ့ အသံဖိုင် အမှတ်၂
Paul Schmeling - Berklee Music Theory Book 2
PDF - 50 Pages - 46 MP3s 192kbps - 65.5 MB
The second inatwo-volume series based on over 40 years of music theory instruction at Berklee College of Music. This volume focuses on harmony, including triads, seventh chords, inversions, and voice leading for jazz, blues and popular music styles. You'll develop the tools needed to write melodies and create effective harmonic accompaniments fromalead sheet.
Posted by Phoe Aye at 3:49 AM No comments:
Labels: Original သီအိုရီ စာအုပ်များ
Paul Schmeling - Berklee Music Theory Book 1 (PDF + Audio)
သီအိုရီလေ့လာလိုသူများအတွက် စာအုပ် နဲ့ အသံဖိုင် အမှတ် ၁
PDF - 90 Pages - 57 MP3s 192kbps - 78.5 MB
Pitch. Rhythm. Scales. Intervals. Chords. Harmony. If you're serious about music, these are fundamental concepts you need to understand and master. Music Theory 101 will set you on your way. After more than 40 years at Berklee, Professor Emeritus Paul Schmeling has helped countless students buildasolid base of musical knowledge, learning skills such as how to read and write musical notation, play notes onapiano keyboard, use scales, intervals, and chords and writeamelody. Paul is alsoamaster pianist, interpreter, improviser, arranger and co-author of the Berklee Practice Method: Keyboard and Instant Keyboard.
Posted by Phoe Aye at 3:43 AM No comments:
သီအိုရီ သမားအတွက် စာအုပ်လေးပါ။
PDF - 84 Pages - 21.4 MB
More thanapattern book, this 80-page book lays out the theory behind the use of pentatonic scales in jazz, and follows with 12 pages of transcribed solos and 40 pages of exercises. Stillafavorite after 14 years, this book has becomeastandard in the field.
ဘေစ်ဂစ်တာသမားတွေ မဖြစ်မနေ လေ့ကျင့်သင့်တဲ့ စာအုပ်လေးပါ။
MP3 လေးပါ နားထောင်ဖို့ပါတော့ လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် အဆင်ပြေမှာပါ။
Hal Leonard | English | 1996 | 56 pages | PDF/MP3 | 117 MB
A follow-up to Building Walking Bass Lines, this book approaches more advanced walking concepts, including model mapping, the two-feel, several 'must know changes,' and other important jazz bass lessons. CD includesajazz trio for practicing standard tunes.
Posted by Phoe Aye at 11:39 AM No comments:
Ray Brown, "Ray Brown's Bass Method"
Hal Leonard | 1999 | 136 pages | PDF | 81.12 Mb
Legendary jazz bassist Ray Brown reveals his lessons and teaching philosophy in this in-depth book. Includes: solo exercises and arpeggios; music fundamentals; right- and left-hand positions; scales; chords; exercises in tenths; rhythm patterns with "drops"; diminished chords; runs and variations; blues patterns; extension scales; and much more.
Posted by Phoe Aye at 11:26 AM No comments:
Classic Funk & RnB grooves for Bass
Posted by Phoe Aye at 11:24 AM No comments:
Posted by Phoe Aye at 11:20 AM No comments:
Posted by Phoe Aye at 11:13 AM No comments:
Posted by Phoe Aye at 11:08 AM No comments:
Bass ကိုဝါသနာပါပြီး လေ့လာလိုသူတွေအတွက် စာအုပ်ကောင်းလေးပါ။ Lesson တွေအဆင်ပြေဖို့အတွက် CD ၂ ချပ်စာ mp3 Lesson ဖိုင်တွေပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းလို့ လွယ်အောင်လည်း mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်။
Posted by Phoe Aye at 2:02 AM No comments:
PinkFloyd_UltimateBassPlayAlong Part 2
Bass ကိုဝါသနာပါပြီးလေ့လာသင်ကြားလိုသူတွေအတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါ။ စာအုပ်ထဲမှာ Note တွေအပြင် CD2ချပ်စာ Lesson တွေလည်း ထည့်ပေးထားလို့ ဝါသနာပါပြီးလေ့ကျင့်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ တော်တော်အဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒေါင်းလို့လွယ်အောင်လည်း mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်။ Exp; Date ဖြစ်သွားရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း Message ပို့ပြီးတောင်းပေးပါ။
ဒါနဲ့ ဒီစာအုပ်က Part2ဖြစ်ပါတယ်။ Part 1 ကိုလည်း မကြာခင်မှာတင်ပေးမှာပါ။
Posted by Phoe Aye at 10:55 PM No comments:
Posted by Phoe Aye at 9:22 PM No comments:
Labels: ကိုင်ဇာ သီချင်းနုတ်စ်များ
Anthony Vitti - The slap bass bible (PDF+MP3)
Slap Bass နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိစာအုပ်ထဲမှာ Slap Bass နဲ့ပါတ်သက်တာတွေကို ရှင်းပြထားရုံသာမက mp3 ဖိုင်လေးတွေပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ mediafire မှာ ဒေါင်းလို့လွယ်အောင် တင်ပေးထားတယ်။
Posted by Phoe Aye at 1:47 AM No comments:
Hindemith Paul_The Craft of Musical Composition
Musical Composition နဲ့ပါတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးပါ။ လေ့လာလိုတဲ့ သူတွေအလွယ်တကူဒေါင်းလို့ရအောင်လို့ mediafire မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။
Posted by Phoe Aye at 1:00 AM No comments:
Labels: Original စာအုပ်များ
Inside the Brazilian Rhythm Section (Lesson)
သိပ်ကောင်းတဲ့ Lesson စာအုပ်လေးပါ။ Note တွေနဲ့အတူလေ့ကျင့်လို့ရအောင် mp3 ဖိုင်တွေပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းလို့လွယ်အောင်လို့ mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်။ Exp; Date ဖြစ်လိုကပျက်သွားခဲ့ရင်လည်း ထုံးစံအတိုင်း message နဲ့ပြန်တောင်းပါ။ ပြန်တင်ပေးပါ့မယ့်။
Inside the Brazilian Rhythm Section.rar ကိုဖြည်ချလိုက်ရင် Note တွေနဲ့အတူတူ mp3 ဖိုင်တွေပါတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သိပ်ကောင်းလွန်းလို့ လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်တင်ပေးတာပါ။
Posted by Phoe Aye at 8:44 PM5comments:
Labels: Original စာအုပ်များ, Original သီအိုရီ စာအုပ်များ
Posted by Phoe Aye at 9:38 AM No comments:
Labels: အယ်လွန်းဝါ သီချင်းနုတ်စ်များ
Posted by Phoe Aye at 9:33 AM No comments:
Labels: ဧကရီ သီချင်းနုတ်စ်များ
Posted by Phoe Aye at 8:47 AM No comments:
Labels: တာရာ သီချင်းနုတ်စ်များ
ငယ်ငယ်တုန်း ဂစ်တာစတီးခါစက ထုတ်ခဲ့တဲ့နုတ်စ်လေးတွေပါ မှားယွင်းတာ ပါရင်သည်းခံကြပါ။
Posted by Phoe Aye at 8:20 AM No comments:
Posted by Phoe Aye at 8:11 AM No comments:
The Complete Mel Bay Method For Classic Guitar
Classical ဂစ်တာကိုလေ့လာချင်တဲ့သူတွေအတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့ စာလုပ်ပါ။ အချိန်ယူပြီးလေ့လာကြည့်ပါ။
အချိန်ကုန်သက်သာပြီး အလွယ်တကူဒေါင်းရဖို့အတွက် mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်။ Exp; Date ဖြစ်သွားလို့ပျက်သွားခဲ့ရင် message မှာတောင်းပေးပါ။ ပြန်တင်ပေးပါ့မယလင့်အသစ်ပြန်တင်ပေးထားတာပါ
Posted by Phoe Aye at 2:49 AM No comments:
Chet Atkins - Vintage Fingerstyle
ဂစ်တာသမားတွေအတွက် Chet Atkins - Vintage Fingerstyle (အလွယ်တကူဒေါင်းလို့ရအောင်လို့ mediafire ကနေပြီးတော့ pdf ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်။ Exp; Date ဖြစ်သွားရင်လည်း ပြန်ပြီးတောင်းပေးပါ။ ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
Posted by Phoe Aye at 2:40 AM No comments:
Ko Phoe Aye Shop
ဆရာစိုင်း ၁၀၈ စမ်းချောင်းလမ်းနဲ့သပြေညိုလမ်းထောင့်။၆လွှာ။ ရန်ကုန်မြို့။
Piano Lesson ebook လေးပါ။ တော်တော်လေးကောင်းလို့ တင...
ဒီတစ်ခါတော့ Flute & Jazz Piano ကို လေ့ကျင့်လိုတဲ့သ...
Paul Schmeling - Berklee Music Theory Book2(PDF ...
Paul Schmeling - Berklee Music Theory Book 1 (PDF ...
၀င်းဦး သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
၀န သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
၀ိုင်ဝိုင်း သီချင်းနုတ်စ်များ (14)
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း သီချင်းနုတ်စ်များ (9)
19:18 သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
BigBag သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
Blackhole သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
Bunny Phyo သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
Dဖြိုး သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
Guitar Pro Tab (2)
Hip Hop သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
Idiots သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
N ကိုင်ရာ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
NG II K သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
Original Magazine (1)
Original Piano စာအုပ်များ (8)
Original Violin စာအုပ်များ (1)
Original ဂစ်တာ စာအုပ်များ (35)
Original စာအုပ်များ (3)
Original ဒရမ် စာအုပ်များ (9)
Original သီအိုရီ စာအုပ်များ (8)
Original ဘေစ်ဂစ်တာ စာအုပ်များ (21)
OXYGEN သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
Recording Ebook များ (5)
Recording Software များ (16)
Recording Tutorial (1)
Ukulele သင်ခန်းစာများ (1)
Wanted သီချင်းနုတ်စ်များ (4)
ကဗျာဘွဲ့မှုး သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
ကာကာ သီချင်းနုတ်စ်များ (5)
ကိုကိုမောင် သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
ကိုင်ဇာ သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
ကံကော်တောမျိုးအောင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ခင်ဝမ်း သီချင်းနုတ်စ်များ (4)
ခင်စုစုနိုင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ခင်ဇာခြည်ကျော် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ခင်ဘုဏ်း သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
ခင်မောင်တိုး သီချင်းနုတ်စ်များ (8)
ခင်မောင်ထူး သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ခန့်ဖြိုး သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ခိုင်ထူး သီချင်းနုတ်စ်များ (5)
ချစ်စမ်းမောင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ချစ်သုဝေ သီချင်းနုတ်စ်များ (4)
ချစ်ကောင်း သီချင်းနုတ်စ်များ (8)
ချမ်းချမ်း သီချင်းနုတ်စ်များ (29)
ဂရေဟမ် သီချင်းနုတ်စ်များ (8)
ဂျက်မြသောင်း သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
ဂျီလတ် သီချင်းနုတ်စ်များ (4)
ငယ်ငယ် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ငဲငယ် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
စည်သူလွင် သီချင်းနူတ်စ်များ (4)
စံလင်း သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
စိုင်းဆိုင်မောဝ် သီချင်းနုတ်စ်များ (4)
စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းနုတ်စ်များ (10)
စိုးပိုင် သီချင်းနုတ်စ်များ (5)
စိုးလွင်လွင် သီချင်းနုတ်စ်များ (7)
စိုးသူ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
စုံတွဲ သီချင်းနုတ်စ်များ (14)
စန္ဒယားလှထွဋ် သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
စန္ဒီမြင့်လွင် သီချင်းနုတ်စ်များ (4)
စန္ဒီ သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
ဆရာ ကိုစိုင်း (1)
ဆိုတေး သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
ဆုန်သင်းပါရ် သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
ဆူဇီ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ညဏ်လင်းအောင် သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
တက္ကသိုလ်အေးမောင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
တင်ဇာမော် သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
တင့်တင့်ထွန်း သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
တွင်ကယ် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
တွံတေးသိန်းတန် သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
တာရာ သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
တူးတူး သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
ထွဏ်းထွဏ်း သီချင်းနုတ်စ်များ (6)
ထွန်းရတီ သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
ထွန်းအိန္ဒြာဗို သီချင်းနုတ်စ်များ (5)
ထူးအယ်လင်း သီချင်းနုတ်စ်များ (8)
ထူးအိမ်သင် သီချင်းနုတ်စ်များ (43)
ဒိုးလုံး သီချင်းနုတ်စ်များ (5)
နီနီခင်ဇော် သီချင်းနုတ်စ်များ (7)
နန္ဒစိုင်း သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
နန္ဒဧရာ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ပိုင်သက်ကျော် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ပိုးဒါလီသိန်းတန် သီချင်းနုတ်စ်များ (5)
ပိုပို သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
ပိုးအိစံ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ပူစူး သီချင်းနုတ်စ်များ (4)
ဖိုးကာ သီချင်းနုတ်စ်များ (6)
ဗစ်တာခင်ညို သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ဗညားဟန် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ဗဒင် သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
ဗန်သော့ကျင်း သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ဗလ သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
ဘရိတ်ကီ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ဘိုဘို သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
ဘိုဖြူ သီချင်းနုတ်စ်များ (4)
မင်းဂျွန်စိုး သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
မင်းမော်ကွန်း သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
မင်းအောင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
မစ်ကီကိုး သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
မာမာအေး သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
မာရဇ္ဇ သီချင်းနုတ်စ်များ (12)
မိစန္ဒီ သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
မို့မို့ဇော်ဝင်း သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
မိုးမိုး သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
မိုးသက်တင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
မိုးသက်နိုင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
မီမီဝင်းဖေ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
မီးမီးခဲ သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
မနော သီချင်းနုတ်စ်များ (5)
မျိုးကြီး သီချင်းနုတ်စ်များ (19)
မျိုးကျော့မြိုင် သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
ယုဇန သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ဖြူဖြူကျော်သိန်း သီချင်းနုတ်စ်များ (6)
မြင့်မြတ် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
မြန်မာပြည်သိန်းတန် သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
မြန်မာသံတေးများ က (1)
မြန်မာသံတေးများ ခ (4)
မြန်မာသံတေးများ ဂ (1)
မြန်မာသံတေးများ စ (1)
မြန်မာသံတေးများ တ (1)
မြန်မာသံတေးများ န (4)
မြန်မာသံတေးများ မ (4)
မြန်မာသံတေးများ ရ (1)
မြန်မာသံတေးများ လ (1)
မြန်မာသံတေးများ သ (1)
ရင်ဂို သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
ရတနာမိုင် သီချင်းနုတ်စ်များ (5)
ရတနာဦး သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ရိမ်မိုး သီချင်းနုတ်စ်များ (5)
ရဲရင့်အောင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
လင်းနစ် သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
လင်းလင်း သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
လာဇရု သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
လှိုင်ဦးမော် သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
လွှမ်းမိုး သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
ကြိုးကြာ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
သဇင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
သန်းနိုင် သီချင်းနုတ်စ်များ (4)
သျှီ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
သင်္ကြန် သီချင်းနုတ်စ်များ (6)
သအို သီချင်းနုတ်စ်များ (4)
သာဒီးလူ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
သီရိဂျေမောင်မောင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
သုမောင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ဟန်ထွန်း သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
ဟယ်ရီလင်း သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ဟင်္သာတထွန်းရင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ဟဲလေး သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
အရိုး သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
အက်ဂါ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
အငဲ သီချင်းနုတ်စ်များ (14)
အင်တာနက် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
အစိုင်း သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
အဖွဲ့ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
အမည်မသိ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
အယ်ဆိုင်းဇီ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
အယ်လွန်းဝါ သီချင်းနုတ်စ်များ (7)
အယ်နောင်း သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
အာဇာနည် သီချင်းနုတ်စ်များ (15)
အိမ့်ချစ် သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် သီချင်းနုတ်စ်များ (6)
အုပ်စုလိုက် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
အကော်ဒီယံအုန်းကျော် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
အဲလက်စ် သီချင်းနုတ်စ်များ (6)
အနိုင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ဧကရီ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ဝေလ သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
ရွှေထိုက် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ရွှေရည်ဖြိုးမောင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ကောင်းမြတ် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ကောင်းဇော် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ချောငယ် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ချောစုခင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ဂျေညီညီ သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
ဂျေမောင်မောင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
ဆောင်းဦးလှိုင် သီချင်းနုတ်စ်များ (5)
ဇော်ဝင်းထွဋ် သီချင်းနုတ်စ်များ (19)
ဇော်ပိုင် သီချင်းနုတ်စ်များ (12)
ဒေါင်လွဏ်း သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
နောနော် သီချင်းနုတ်စ်များ (16)
ပေါ်လစီ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
မေဆွိ သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
မေသူ သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
မောင်မောင်ဇော်လတ် သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
ရေဘက္ကာဝင်း သီချင်းနုတ်စ်များ (3)
လေးနက် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
လေးဖြူ သီချင်းနုတ်စ်များ (80)
ဟေမာနေ၀င်း သီချင်းနုတ်စ်များ (4)
အေသင်ချိုဆွေ သီချင်းနုတ်စ်များ (12)
အောင်လ သီချင်းနူတ်စ်များ (6)
အောင်အောင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
အောင်နိုင် သီချင်းနုတ်စ်များ (1)
အေနွန် သီချင်းနုတ်စ်များ (2)
ကိုဝင်းကို ရဲ့ မြန်မာဂီတ၀ပ်ဆိုက်လေးပါ...
ဖိုးအေး ရဲ့ အရင်ဘလော့အဟောင်းပါ
ဖိုးအေး ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝပ်ဆိုက်ပါ